Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /customers/0/9/6/barqamaal.com/httpd.www/wp-includes/compat.php on line 502 Tukaraq and western perception of war (Aragtida westernka ee dagaalada) – Barqamaal
Tukaraq and western perception of war
(Aragtida western ka ee dagaalada)
Asc: Waxaa magaalada Tukaraq isku horfadhiya laba ciidan oo ka kala yimid labada maamul, Puntland iyo Somaliland. Hadaba maxay tahay sababta keentay in ilaa hada aan Puntland tilaabo milatari qaadin, taas oo ay kaga jawaabayso duulaanka maamulka somaliland kula wareegen Tukaraq. Dadku waxay isla dhexmarayaan: Abdiwali Cali Gaas dagaal marabo, hay,adaha caalamigaa sida IGAD, UN iyo kuwa somalia arimaheeda daneeya ayaa hortaagan, Somaliland ciidankeeda ayaa ka xoog badan kan Puntland, beelaha ku abtirsada Puntland ayaa kala qaybsan ama kala aragti duwan. Arimahaas oo dhan waa kuwa u baahan baaritaan dheer aniguna aanan halkaan kaga jawaabayn. Mida aan rabo inaan dadka u iftiimiyo waa aragtida ay qabaan reer galbeedku marka laga fiiriyo dhinaca falsafada dagaalka iyo dhul kala qabsiga. Duulaanka Somaliland ku qabsatay Tukaraq waxaa layiraahda Fait accompli ama An accomplished fact oo macnaheedu tahay waa hawl soo dhamaatay laguna kala baxay. Duulaankii Tukaraq waxay lamid tahay tii lagu kala adkaaday Laascaanood, Taleex, hadana Tukaraq. Falsafada western kuna waa mida dhahaysa dagaalkii waa lagu kala adkaaday ee si aan dagaal dambe u dhicin qolo walba meeshay joogto haku sugnaato. Waxaana muuqata in maamulka Puntland iyo hogaamiyahoodu uu aqbalay midaas dhahaysa Fait accompli , waa nala ka adkaaday, waxayna sugayaan inta bulshada reer Puntland samrayaan si hadhawto loogu qanciyo arimaha aan kor ku soo xusay ee hada bulshada dhextaal, oo ay ku tilmaamayaan sababta Puntland uga fal celin weyday duulaankii Tukaraq. Su,aasha meesha taal waa: somaliland ma ku qancaysaa meesha ay hada ciidankeedu ku suganyahay? goormay yoocada tagayaan? Ma sidii Laascaanood, Taleex iyo Tukaraqbey bey waqti siin inta ay yoocada ku tageyso? Marka laga eego guulaha ay gaartay Somaliland iyo sida ay waqtiga uga faaidaysanayso iyo hogaamiyayaashii Puntland soo maray ama hadaba haya hogaanka qabsashadii laascaanood, Taleex yo Tukaraq waxaan qiyaasayaa ineysan waqti dheer sugi doonin iney yoocada tagaan, waayo waa mida kaliya oo hortaagan aqoonsigii ay ku dhawaad 30 sano ku haminayeen. Waa aduun iyo looba joogee.
Badhawe Aden Hussein